Yini okufanele uyenze uma floor imifantu - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Yini okufanele uyenze uma floor imifantu
Hlela: UDenny　2020-01-05　Iselula
Amathiphu wokulungiswa kokwehla kwesisekelo:
1. Ingqimba yepende elingaphezulu liqhekekile futhi liyalungiswa, bese kuqhekeka imifantu emincane ependini. Ifilimu lokupenda liqhekekile ngoba phansi libonakaliswa ukukhanya kwelanga noma umoya omude, futhi phansi lomile futhi liyashwabana.
Isixazululo: Inani elincane labantu lingakha i-wax kahle. Ezimweni ezinzima, upende ungasulwa kuphela. Le ndlela ilula kakhulu, okokuqala ngenza indawo egqokwa nge-sandpaper ukususa ukungcola, bese uyesula ngendwangu ethambile eyomile, uphinde uyigqoke noma ufake ifilimu le-polyester.
2. Ukwelashwa kokulungiswa kweshadi le-floor board. Ngaphansi okwaqhekeka okuncane, ungasebenzisa enye ingxube ukugcwalisa imifantu yaphansi; uma ukuqhekeka kukubi kakhulu, okuwukuphela kwekhambi ukufaka ingxenye yengxenye ephukile, abathengi bangaxhumana nomakhi Thenga imodeli edingekayo yokulungisa.
3. Ukulungiswa kwegebe phakathi kwezitezi. Uma igebe eliphakathi kwezakhiwo lidlula i-2MM, kuyadingeka ukwelashwa kokulungiswa. Uma ishighark ingaphansi kwe-2MM, akukho kulungiswa okudingekayo. Kuzobuyela kokujwayelekile ngemuva kwekwindla nobusika. Ezimweni ezinzima, hlanganisa phansi ngokuphelele umhlaba, uphinde usakaze futhi uphinde ubuyisele ingxenye yephansi njengoba kudingekile. Ngalesi sikhathi, amalunga wokunwebeka kufanele agcinwe ukuvikela phansi umhlaba ukuthi ungakhuli lapho kumanzi.
4. Ekwindla, ukushayeka phansi ngeke kulungiswe. Ekwindla, ukuqhekeka phansi kwokhuni ngenxa yezizathu zesikhathi sonyaka yinto eyejwayelekile futhi ejwayelekile. Ngoba umoya wekwindla womile, ukuqhekeka phansi kwokhuni kubangelwa ukuhwamuka kancane kancane kwamanzi. Ngemuva kokulungiswa ngalesi sikhathi, empeleni amanzi ayaqhubeka nokuguquguquka, ngakho-ke kusenokwenzeka ukuthi kubuye kuqhume futhi. Ngakho-ke, inkinga enkulu kakhulu yokuqhekeka phansi ekwindla ingahlehliswa kancane, ngaphandle kokujaha ukulungisa.
Yini okufanele uyenze uma floor imifantu Okuqukethwe okuhlobene
1. Ungasusa kanjani umuthi wokuhlanza amagciwane ukuze phansi kuhlanzeke kakhudlwana? Okokuqala, lungisa amathuluzi okubulala amagciwane angalungile. Ngokubalulekile, kukhona iziponji, amathini wokup...